Qaxooti Ku Xanniban Xadka Croatia & Serbia
Qaxootigaas ayaa xalay ku dhacayay dhaxan aad u qabow iyaga oo aan haysanin raashin ku filan, oo ay cunaan.
Kummannaan qaxooti ah ayaa ku xanniban xadka u dhexeeya dalalka Croatia iyo Serbia kadib markii uu dalka Hungary xidhey sabtidii goobihii xadkiisa looga sii gudbi lahaa ee dhinaca dalka Croatia.
Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa axadii shaley dhex-fadhiyay basas aan lahayn kuleyliyaha hawada, waxaana ay sugayeen sidii ay ugu gudbi lahaayeen dhinaca dalka Serbia iyaga oo ku sii jeeda wadamada Midowga Yurub.
Afhayeen u hadley hay’ada u qabilsan Qaramada Midoobay arrimaha qaxootiga oo magaciisa la yidhaah Bahar Balooj ayaa sheegay go’aanka dawlada Hungary ay ku xidhey xadkeeda inuu sii kordhiyay dhbaatada ba’an iyo xaalada qalafsan ee haysata dadka rafaadsan, waxaanu arrintaas ku tilmaamay iney sii korodhisey mudada safarka ay ku sii jirayaan dadkaas qaxaya.
Dhinaca kalena dalka Slovenia ayaa sheegay inuu hadda xidhaynin xadkiisa oo ay maalin kasta usoo gudbi karaan 2,500 oo qof, balse wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Slovenia Bosjan Sefik ayaa axaddii sheegay in tiro intaas ka badan aaney aqbali doonin, waxaanu tilmaamay in laga yaabo muddo 10 maalmood ah gudahood iney 35,000 oo qaxooti ah soo gali karaan dalkiisa taas oo aan la aqbali karin.
Midowga Yurub ayaa filaya iney soo galayaan 700,000 oo qaxooti ah oo ka soo barakacay dagaallada iyo saboolnimada ka jirta waddamada Suuriya iyo Afgaanistaan ilaa iyo dhmmaadka sannadkan, hase ahaatee madaxda Midowga Yurub ayaa ku guul-darraystay iney keenaan qorshe isku dheelli tiran oo ay ku qaybsadaan qaxootiga ku sii qulqulaya yurub 28-ka waddan ee ka tirsan Midowga Yurub.